Na-achọsi ike ịbụ otu n'ime obodo ndị dị na Futuristic na ụwa, Dubai
Ulo oru di iche iche nke Job Search Platform na Dubai
Atụmatụ ọdịnihu ọ bụla nwere ike ịbụ usoro ọrụ na njikwa banyere ọdịmma ndị mmadụ, njikwa ihe eji eme ihe, ịhazi atụmatụ obodo mepere emepe nke gụnyere usoro njem na netwọkụ nkwukọrịta na nchebe na nkwalite gburugburu eke okike na-enye ezigbo ohere iji rụọ ọrụ dị mkpa na nhazi ebe na mpaghara n’ofe ụwa niile.
Ebe E Si Nweta: https://www.smartdubai.ae/
Ọ dị mkpa ịmata nke ahụ ụfọdụ mba gburugburu ụwa ebidola ime atụmatụ maka iwu obodo mara ihe nwere ike iji teknụzụ nyere aka kee akụ Ntughari maka ime mgbanwe ka ibi ndu ka nma gburugburu ebe obibi n’uwa, imepe na imeziwanye etu o si ebi ndụ maka ọdịnihu jiri mbọ inwe obodo ya mee ka data ha gbakọrọ ọnụ ọgụgụ dị na ịntanetị na-enweghị nsogbu ọ bụla.
Kedu obodo dị mma?
Obodo ukwu nke nwere ike iji teknụzụ maka atụmatụ na-ele anya iji nyere aka ịmepụta ezigbo ndu obibi atụ ụkpụrụ ụlọ na teknụzụ, ka nyocha na-aga n'ihu n'ihe banyere mmiri, njem, akwa obodo, na gburugburu ebe niile. na echiche nke ime ka obodo mara ihe n’abɔfo nso. Site n’ịgba ndị mmadụ ume, ihe owuwu, na ihe osise ndị mmadụ na-aga n’ihu, ndị si ebe dị iche iche ga-ezukọ n’obodo ha, omenala ha ga-agakọ nke ọma. Ọzọkwa, ihe owuwu obodo ahụ na-aga ịrị elu melite karịa n’ebe ọ bụla n’ụwa.
Ebe E Si Nweta: Smart Dubai https://2021.smartdubai.ae/
Ụlọ ọ bụla iji wụnye usoro telivishọn nke a ga-eji na-enye mgbakọ vidiyo ma na-ezipụ ozi ndị bi n'obodo ahụ, ezinụlọ inwe opekata mpe otu robot site na njedebe nke 2020, etiti ọrụ ebe teknụzụ nwere ike inyere obodo aka ịmụrụ anya ma kwadebe mgbe ọdachi mere. Ọ bụghị naanị nke ahụ, mana usoro a ga-ebu amụma banyere ihu igwe, idei mmiri, na ọdachi ndị ọzọ na-emere onwe ha, ụbọchị ole na ole tupu oge ahụ.
Atụmatụ Smart City
Imezu Ike atụmanya azụmaahịa, ebe a ga - enwe nchedo zuru oke nke ihe omume nchoputa & ichoputa ndi ochichi, nnabata igwe ogbara ohuru web a dika advancecities.com, na gọọmentị nwere ike ịga n'ihu site na ịwụnye Ngosipụta Anya Ntanye na Central Office nke enwere ike iji chọpụta ma mara àgwà ikuku nakwa nyochaa ogo usoro njem na obodo, ka ọ bụrụ ndị na-eto eto ngwa ngwa n'ụwa ya na akụ na ụba na-eto ngwa-ngwa, bụrụ otu n’ime mpaghara teknụzụ dị n’ụwa, ikuku carbon na-adigide obodo mkpọsa enweghị mmepe na teknụzụ, ije na ije nke odinihu site na ugbo ala ndi na-efe efe
Wi-Fi na-akwụghị ụgwọ yana usoro iwu siri ike gbasara nhazi nke ụlọ na ichedo ike. ịbụ obodo e wuru iji dabere na ike anyanwụ na akụrụngwa akụrụngwa, Mepụta mgbanwe mgbanwe ihu igwe site na iji IT soro usoro ikuku ikuku ma kọwapụtakwa nsogbu ndị ọzọ metụtara gburugburu ebe obibi dịka mkpa mmiri na njikwa mmiri.
Ma ọdịnihu a dị ịtụnanya, ihe mepụtara n'oge na-adịbeghị anya- ejirila ihe mebere mmadụ mee DNA. Ọ bụ nzọụkwụ dị mkpa na usoro ihe ọmụmụ banyere ndị sayensị na-eke mkpụrụ ndụ ihe mepụtara ugboro anọ buru ibu ma sie ike karịa ụdị mkpụrụ ndụ ọ bụla ha mebere na mbụ.— Ọrụ.HyperBola
Ebe E Si Nweta: https://www.instagram.com/smartdubai/
Smart obodo dị ka Dubai na Abu Dhabi na-akụ ọhụụ United Arab Emirates ọhụụ maka ọdịnihu. Yabụ, atụmatụ akara ngosi nke Dubai City City City na-agbagha ụzọ ndị bi na ya ndị ọbịa bi, ọrụ ma kpọọ. N'aka nke ọzọ, Dubai na-achọ ịghọ otu n'ime obodo kachasị n'ọdịnihu n'ime ụwa site na 2021.
Anyị na-enye ezi nduzi ugbu a maka oru na Dubai. Ndị otu anyị kpebiri ịgbakwunye ozi maka asụsụ ọ bụla maka anyị Ọrụ na Dubai eduzi. Yabụ, na-eburu nke a n'uche, ị nwere ike ịnweta nduzi ugbu a, Atụmatụ na ọrụ na United Arab Emirates ya na asusu gi.